आज तेरिया मगरको जन्मदिन, कति बर्षमा लागिन् ? - हरपलको ताजा खबर
आज तेरिया मगरको जन्मदिन, कति बर्षमा लागिन् ?
सोम, साउन २७, २०७६
काठमाडौं / तेरिया मगर चर्चित डान्सर हुन् । उनले सानो उमेरमा नै निकै सफलता हासिल गरेकी छिन् । सन् २०१४ मा डिआइडी लिटर मास्टर को उपाधी जितेपछि तेरियालाई अधिकांश दर्शकले चिन्न थालेका हुन् । उनले आफ्नो मात्र नभएर नेपालको नाम नै विश्वभर चिनाउन सफल भएकी छिन् ।
आज तिनै डान्सर तेरिया मगरको जन्मदिन हो । आजबाट तेरिया १७ बर्ष पुरा भएकी छिन् । तेरिया हाल मुम्बईमा नै बसेर अध्ययन गरिरहेकी छिन् । त्यसबाहेक देश तथा विदेशका कार्यक्रममा पनि उनी निकै व्यस्त हुने गरेकी छिन् ।
तेरिया जति राम्रो नाच्छिन्, त्यति नै मिठो गीत पनि गाउँछिन् । उनले केहीसमय अघि नेपाल आएको समयमा तिम्रो मायाले बाधेर राख बोलेको गीत कभर गरेकी थिइन् । जसलाई दर्शकले निकै रुचाएका थिए । आज तेरियाको जन्मदिन भएकाले उनलाई शुभकामना दिनेको ओइरो नै लागेको छ ।
(हाम्रो तर्फबाट पनि तेरियालाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना )
कलेज लाइफ सुरु गरेसँगै फेरियो करिश्माको जीवनशैली
मिस वर्ल्डमा अनुष्का श्रेष्ठ सहभागी हुँदै
विष्णु खत्रीले लेखे रमेश विजीलाई खुल्ला पत्र ( पढ्नुहोस् )
मेराे प्रिय मित्र रमेश बि जी ज्यु, चुनाबी सरगर्मीकाे जित हार पछि दिनमा...